Petra-kevitry ny sombin-dahatsoratra - Wikipedia
Ny petra-kevitry ny sombin-dahatsoratra dia petra-kevitra ampiasain'ireo mpanao heviteny amin'ny Baiboly nanomboka tamin'ny taonjato faha-19 mba hanazavana ny fiforonan'ireo lahatsoratry ny Baiboly sy mba hamaritana ny daty mety nanoratana azy ireo.
I Friedrich Schleiermacher (1768-1834) no namaritra voalohany io petra-kevitra io. Milaza io petra-kevitra io dia fa vokatry ny lovantsofina niforona tamin'ny fotoana samihafa ny andalana sasana ao amin'ny Baiboly. Efa nisy talohan'ny lamin-kevitra Graf-Wellhausen (na petra-kevitra ara-tahirinkevitra), izay nisolo azy hatramin'ny taona 1970, ny petra-kevitry ny sombin-dahatsoratra raha ny amin'ny hevitenin'ny Testamenta Taloha no resahina. Nanomboka tamin'ny taona 1980 anefa dia nihemotra ny fifantohan'ny mpikaroka amin'io petra-kevitra io izay natambatra tamin'ny "petra-kevitry ny fameno".
Ao amin'ny sehatry ny fandalinana ny Testamenta Vaovao, ny petra-kevitry ny sombin-dahatsoratra, izay mihevitra ny fampandriana an-tsoratra ny Filazantsara (na Evanjely) ho vokatry ny "fananganana fitantarana samihafa sady mahaleo tena (tsy mifampiankina), dia nametraka fa ny tenin'i Jesosy sy ny asa nataony dia noraiketina an-tsoratra anatina fitantarana fohy, fotoana fohy taorian'ny nahafatesany. I Schleiermacher dia miantso ireo fitantarana ireo hoe diégèses, araka ny fampiasany ny voalaza ao amin'ny Evanjelin'i Lioka (Lio. 1.1: "Satria maro no efa nanoratra nandahatra tantara (diêgêsis) ny amin'ny zavatra izay efa tanteraka tamintsika tokoa).
I Daniel Margaret dia nanamarika fa io petra-kevitry ny sombin-dahatsoratra io dia hamafisin'ny zava-misy ao amin'ireo filazantsara sinoptika, izay boky vokatry ny fanambarana sy fandaharana sombin-dahatsoratra maro samihafa sy miseho amin'ny ampahany, araka ny asehon'ny atao hoe Formgeschichte (izay midika hoe "Fitsikerana endrika"). Io petra-kevitra io anefa dia imaneho ny fananany fetra satria tsy afaka manazava ny fifanojoam-pijery sy ny fisian'ny andinin-tsoratra mirazotra, na dia afaka nanazava ny fahasamihafan'ny hasin-dahatsoratra (na perikopa).
Petra-kevitra momba ny fanoratana ny Pentateoka:
↑ Thomas Römer, Jean-Daniel Macchi et Christophe Nihan (dir.), Introduction à l'Ancien Testament, Labor et Fides, 2009, p. 140.
↑ 2,0 2,1 2,2 et 2,3 Daniel Marguerat (dir.), Introduction au Nouveau Testament : Son histoire, son écriture, sa théologie, Labor et Fides, 2008, p. 36-37.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Petra-kevitry_ny_sombin-dahatsoratra&oldid=976745"
Dernière modification le 11 Novambra 2019, à 08:53
Voaova farany tamin'ny 11 Novambra 2019 amin'ny 08:53 ity pejy ity.